Tonizia: Bilaogera manohitra ny fanagadrana mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2018 3:26 GMT
Nahatonga ireo bilaogera hanao fanentanana fanohanana miantso ny famotsorana azy ireo ny didim-pitsarana nomena ny vondrona mpianatra Toniziana amin'ny sazy an-tranomaizina manomboka enim-bolana ka hatramin'ny telo taona noho ny fikarakarana sit-in tao amin'ny oniversite hitakiana ny zon'ny mpianatra vehivavy hanana trano hipetrahana.
Natsangana ny vondrona Facebook, antsoina hoe No to Students Imprisonment (Tsia amin'ny fanagadrana mpianatra) sy ny bilaogy: Free Jailed Tunisian Student (Avohay ny mpianatra Toniziana nogadraina). Nanoratra momba ity tantara ity ny bilaogera Toniziana.
Foetus manazava hoe:
Nogadraina enim-bolana hatramin'ny 3 taona ireo mpianatra Toniziana noho ny fihetsiketsehana manohitra ny olana fiatranoana atrehin'izy ireo. Tsy manaiky mihitsy ity sazy ity aho, fitsarana ara-politika ankolaka. Azafady, aelezo ny teny ary tohero ny didy jadona Toniziana.
Carpediem nibilaogy momba ny olana ary nilaza hoe:
Aiza no hahita ara-drariny sy ara-dalàna kokoa raha tsy mpianatra tanora manana fahatsiarovan-tena kely ianao ary mahatsiaro voakasiky ny fanatsarana ny fepetran'ny fampianatranoana sy ny fampianarana ho an’ ireo tanora an'aliny. Aiza no hahita fihetsiketsehana milamina kokoa noho ny fikarakarana sit-in ao amin'ny toeram-ponenana oniversite mba hahenoana izany fitakiana izany.
Kanefa…Ny tsy faizina an amin'ny toeran-kafa, ho fitakiana ara-drariny sy firotsahana madio, anefa dia saziana an-tranomaizina ao Tonizia, firenena izay manohy milaza fa niavian'ny fandaharan'asan'ny Firenena Mitambatra, Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tanora 2010″….Tena fihatsarambelatsihy!
Au Quotidien nanampy hoe:
Satria tsy any am-ponja ny toeran'izy ireo, satria zo feno ny hetsika sendikaly ataon'izy ireo, satria tsy manaiky ny fanagadrana noho ny hevitra ara-politika izahay, mifanentana ny bilaogera Toniziana mba hanohana sy hanampy ireo mpianatra nogadraina!! Nisy ny vondrona fanohanana ny mpianatra natsangana tao amin'ny Facebook, miaraha amin'izy ireo azafady!!